Carbide rhanga-Iibhothi uqhoqhoqho
Iikhabhayithi zekhabhayithi zokusika kwefayibha yemichiza
Iikhabhayithi zekhabhayithi eziGuquliweyo
IProfayili yeCarbide Isitshixo se-Edge Trimmer Faka iiNtsimbi
I-1: Ukusebenza ngokuchanekileyo kokulungisa i-carbide setyhula blade kumnini: Qiniseka ukuba i-carbide slitter blade blade imile ngokuzinzileyo, i-knife-edge ayikwazi ukuya ngasekhohlo okanye ngasekunene okanye ixhume inyuke isenyuka ngexesha lokusebenza. 2: Isixhobo sokulola imela: Ukulola imela kungasetwa ngesandla okanye kwenziwe ngokwezifiso. I-ma ...
ZWEIMENTOOL Xiamen Ibhlog yamatye oLuntu yaMazwe ngaMazwe
UZweimentool uthathe inxaxheba kwiXiamen International Stone Fair ngempumelelo enkulu ngoMeyi 18, 2021, inkampani yethu yathatha iimveliso zethu eziphezulu zamanzi iityhubhu zokuxuba i-waterjet kunye nezinto zokucheba i-waterjet ukuze zithathe inxaxheba kwi-China Xiamen International Stone Fair. Inkampani yethu kwi hal 3 mboniso ...
I-Cemented Carbide Industry Association, ibambe isemina yemveliso yobuchwephesha ye-carbide, kwaye ikhokele ekwakheni isiseko semveliso yentsimbi enesamente ngentsimbi ye-9 ngoMeyi 8, 2021, eHuidong Hotel kwisiXeko saseZigong, i-18th Cemented Carbide Production kunye neTechnologi .. .
Inkampani yethu iya kuthatha inxaxheba kwi-21 China Xiamen International
I-Stone Fair eza kubanjelwa e-Xiamen, eFujian, e-China ukusukela nge-18 ukuya kwi-21 Meyi 2021, i-Xiamen International Stone Fair iya kubanjelwa kwiNdibano ye-Xiamen kunye neZiko leMiboniso ukusukela nge-18 ukuya kwi-21, 2021. Njengomboniso omkhulu wase China kunye nelitye ...
Ukususela ngo-Apreli 22 ukuya ku-24, ngo-2021, i-Chengdu Industrial Fair yonyaka yavulwa kakhulu kwi-Western China International Expo City e-Chengdu, kwiPhondo le-Sichuan. Lo mboniso ngumboniso wamazwe aphesheya okhokelwa nguHannover Milano Exhibition (Shanghai) Co, Ltd., kwaye al ...